जिमेल प्रयोग गर्ने १० स्मार्ट तरिका - Tech News Nepal Tech News Nepal
शुक्रबार, माघ २, २०७७ २२:२५
जिमेल प्रयोग गर्ने १० स्मार्ट तरिका
तर ईमेल सामान्य रुपमा प्रयोग गर्दा कहिलेकाहिँ अनावश्यक रुपमा धेरै समय खेर गइरहेको हुन्छ । साथै एउटै कामका लागि उही प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहन दिक्क लाग्दो हुन्छ ।
आज हामी तपाईंलाई जिमेलका १० यस्ता टिप्स बताउँदै छौं, जसबाट तपाईंको थुप्रै समय मात्र जोगाउने छैन, झन्झटबाट समेत मुक्त गर्नेछ ।
त्यसमा आफूले चाहेको ग्रुपको नाम लेख्नहोस् (उदाहरणका लागि ‘मार्केटिङ ग्रुप’) र सेभ गरिदिनुहोस् । अब लेबलमा तपाईंको मार्केटिङ ग्रुप नामक नयाँ लेबल तयार हुनेछ ।
मानौं तपाईं सहरभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । तर तपाईंको ईमेलमा अफिसको महत्वपूर्ण ईमेल आयो । यस्तोमा त्यसलाई चेक गरेर रिप्लाई दिनुपर्‍यो ।
यस्तोमा अफिसको कुनै सहकर्मीलाई आफ्नो ईमेलको पासवर्ड दिनुपर्ने भयो । अब के गर्ने ?
अब तपाईंलाई ईमेल आईडीमा रहेको नाम सच्याउन मन छ । तर सबैतिर तपाईंले त्यही पुरानै आईडी दिनुभएको छ ।
यस्तोमा के गर्ने ? पक्कै पनि तपाईंले यस किसिमको दुविधाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अब नयाँ ईमेल बनाउनु भयो भने ईमेल जति पुरानो आईडीमा आइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले बारम्बार दुवै ईमेल आईडी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब त्यसभित्र शिरानीमा रहेको फरवार्डिङ एण्ड पीओपी/आईएमएपी लेखिएको ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् ।
तपाईंको ईमेलमा आउने मेलका लागि जिमेलले नै कयौं लेबल अर्थात क्याटेगोरी बनाइदिएको हुन्छ । त्यसमा प्राइमरी, सोसल, प्रमोसन्स, अपडेट, फोरुम आदि हुनसक्छन् ।
यसमा क्याटेगोरीअनुसारका फरक फरक ईमेल आइरहेका हुन्छन् । यदि तपाईं जिमेलले बनाइदिएको क्याटेगोरीमा चित्त बुझाइरहनु भएको छैन र एउटा क्याटेगोरीको ईमेल अर्को क्याटेगोरीमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यसमा माथि शिरानीमा रहेको फरवार्डिङ एण्ड पीओपी/आईएमएपी ट्याबमा जानुहोस् ।